Golaha Ammaanka ee QM oo ka hadlay xiisadda Puntland iyo Somaliland – Radio Daljir
Golaha Ammaanka ee QM oo ka hadlay xiisadda Puntland iyo Somaliland
Juunyo 8, 2018 11:09 b 0
Golaha Ammaanka ee QM ayaa qoraal uu soo saaray waxaa uu kaga dalbaday maamulada Puntland iyo Somaliland inay joojiyaan colaadda ka dhex taagan labada dhinac, iyagoona fulinaya balanqaadkii ay u sameeyeen Beesha Caalamka ee la xiriiray joojinta colaadda gobolka Sool.
Golaha ayaa ku booriyay labada maamul inay kala qaadaan ciidamada is horfadhiya , wada hadalna lagu dhameeyo khilaafka ka dhex jira labda dhinac.
Waxaa lagu baaqay in la ogolaado in dadka barakacay loo sameeyo gargaar, guryahoodina ay dib ugu laabtaan.
Dagaal ka dhex qarxay maamulada Puntland iyo Somliland oo ka dhalatay duulaan maamulka Somaliland uu kusoo qaaday, kuna qabsaday deegaanka Tukaraq oo 86km u jirta Garoowe ayaa waxaa ka dhashay dagaalo ay ku geeriyoodeen dad ku dhow todobaadtan oo ka mid ah dhinacyadii diriray.
Maamulka Koonfur Galbeed oo soo bandhigay maydadka rag katirsan Al-shabaab